Gospel Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ose zvino ndipo pandichazofunga kutaura munhu anoti vanoda kuva muKristu, asi ivo vanofunga nguva chaizvo hazvina zvakanaka. Pandinovabvunza nei, ivo kundiudza zvose zvavo, vose zvikanganiso zvavo, uye zvose ndakavhiringidza zvavakanga waita kare. Handina nharo navo pamusoro zvavo, asi ndinoita vasundire shure zvekungofungira yavo.
Vari kuzvitutumadza kuti chivi zvimwe disqualifies kuuya kwaKristu, apo ichokwadi chaiyo pakatarisana. Kuva mutadzi hakuiti kutitadzisa Kristu; zviri chikonzero tinofanira naYe. Kana isu kumirira kusvikira tikatarira akakwana akamumbundira tinenge tichimirira nokusingaperi.
Mune mumwe chandinonamatira prices, Charles Spurgeon inotikurudzira kuti kurega kutsvaka pachedu, uye kutanga tichitarira kuna Jesu. Anoti:
"The! iwe unoti, 'Handina kutendeuka zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Handitendi zvakakwana.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini ndiri zvakare kukodzera.' Izvozvo uchizvichenjerera. 'Ini havagoni kuziva,'Anodaro mumwe, 'Kuti ndine chimwe kururama.' Hazvina zvikuru kodzero kutaura kuti hamuna chero kururama; asi zviri zvikuru kuipa kutsvaka chero. It…
Video pamusoro Lecrae, Eric Mason, uye Trip
Heunoi video of Lecrae, Eric Mason, uye ini kukurukura hip uye Gospel
Recent Gospel Coalition video of Eric Mason, Lecrae, uye ini kukurukura dema vabereki uye “kudzorwa” zvouMwari